भुषण र तारा | Kamsastra
Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, भुषण र तारा,
आफ्ना यौनाङ्काक्षा र सोचाइहरुको आदानप्रदान पछि भुषण र ताराको भाइब्रेटर सागर र पार्वतीले प्रयोग गर्न दिएपछि पहिलो पटक उनीहरु बीच सीधा भेट भएको थियो। भाइब्रेटर प्रयोग गरेर आफ्नो योनिमा एकैसाथ लाडो र मुखको अनुभव गरेको रात पार्वतीलाइ सुत्न गाहारो भइराखेको थियो। अब अगादि …….. तर निद भने अझै आइरहेको थिएन्। किन किन उनलाइ आज आफुले पहिलो पल्ट गरेको सहबासको याद आइराखेको थियो। बीबीएस गरिराख्दा एउटा कम्प्युटर ट्रेनिङ्गको बेला उनको भेट सागरसंग भएको थियो। सागर त्यसबेला भर्खरै पढाइ सकेर त्यस ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्यूतमा काम गर्न सुरु गरेका थिए। भेटघात बिस्तारै प्रेममा परिवर्त्तन भयो। उनीहरु हरेक दिनजसो नै भेत्थे, अनि सागरसंग मोटरसाइकलमा बसेर बिभिन्न थाउँहरु घुम्न जान्थे, रेस्टुराँमा खान्थे।
समय निकै रमाइलो थियो। रेस्टुराँको तेबलमा पहिलो पल्ट काउकुति लाग्ने गरि एकअर्काको हात समातेर मुसारेको थिए उनिहरुले। अनि एकदिन चोभार घुम्न जाँदा जंगलतिर पसेर धेरैबेर मायाप्रितिको कुरा गरे र यस क्रममा उनीहरुको बीच पहिलो पल्ट ओठ ओठको गहिरो चुम्बन भएको थियो। अनि त्यहिं अंगालोमा चुम्बन गर्दा गर्दै सागरले पहिलो पटक पार्वतीको लुगामाथिबाट स्तन छोएको थियो। त्यसपछिका एकान्त भेटघातमा किस गर्नु नियमित जस्तै भएको थियो। एक दिन अंगालो मारेर किस गर्दै हातहरु जीउभरि सलबलाउँदै गर्दा सागरले पार्वतीको हातलाइ पाइण्टमाथिबाट उस्को लिङ्गको स्पर्श गराएको थियो। अनि उसको हात पनि सलवार कुर्ताको माथिबाट उनको योनि र चाकक्षेत्रमा निकै काउकुती लाग्ने गरी सलबलाएको थियो। एक दिन घुम्ने क्रममा उनीहरु नगरकोट जाँदै थिए। डाँदामाथि पु्ग्न लागेको बेला पानी परेर दुबैजना निथ्रुक्कै भिजे। अनि पहिलो पुगिएको होटलमा पसे। तातो चिया अर्डर गरेर तेबुलमा बसे। चिसोले पार्वती लगलग काम्न लागेको थियो। चिया दिन आएको होटलवालाले उनीहरु भिजेको देखेर रुमालहरु र कोठा अफर गय्रो। अरु कुनै उपाय थिएन, ठिकैमानेर दुबैजना एउटा कोठामा पसे। कोठामा पस्ने बित्तिकै सागरले ढोका बन्द गरे। अलि लज्जा अलि डर र धेरै प्यार र चाहनाको वातावरणमा उनीहरु तुरन्तै अँगालोमा बाँधिए। दुबैको सबै लुगा देखि भित्र जीउ सम्मै निथ्रुक्कै भिजेको थियो। र यो भिजेको शरिरले उनीहरुलाइ झनै रोमान्चित गर्नलागेको थियो। अनि भिजेको लुगा लगाइ राख्ने कुरा पनि भएन्। बेडमाथि राखिएको एउटा तौलिया लिएर पार्वती बाथरुममा पसिन्। उनको ब्रा र अण्डरवेयर समेत भिजेको थियो। कपाल पुछेर एउटा तौलिया टाउकोमा बेरिन्। अनि माथिको लुगा खोलेर निचोडिन्। एउता ठुलो तौलियाले आफ्नो आङ धाकिन। निचोदिसकेपछि चिसै भएपनि फेरि लुगा लगाइन र बाहिर निस्किन्। सागर पनि कोठामा आफुलाइ सुकाउने कोशिस गरिराखेको थियो। उ आफ्नो जुत्ता, मोजा, र टिसर्त मिल्काएर नाङ्गो छातीमा थियो र एउता तौलियाले टाउको पुछ्दै थियो। यस्तो अवस्थामा उनिहरुले अहिलेसम्म एकअर्कालाइ देखेको थिएनन् तर जुन गतिमा उनिहरुको प्रेम अघि बढिराखेको थियो त्यसको लागि यो स्थिति अस्वाभाविक भने थिएन। बाहिर निस्कने बित्तिकै प्रेमभावले दुबैलाइ तान्यो र त्याप्प एकअर्कोको अंगालोमा पुगे।अनि हातहरु जीउभरि सलबलाए। "भिजेको लुगा के लाउने" भन्दै सागरले पार्वतीको लुगा फेरि खोलिदियो। अलि डर लागीराखेता पनि पार्वती प्यारमा पुरै गलिसकेकि थिइन र परिस्थितिले उनलाइ निकै कामुक बनाइराखेको थियो। उनी रुमालले जीउ छोपेर बेडतिर गइन र कम्बल भित्र पसिन। "त्यो भिजेको सुरुवालले बेड भिजिहाल्छ नि" सागर जिस्किदै थियो तर सुरुवाल साँचै भिजेको थियो। सागरले नै कम्बल भित्र हात पसाएर सुरुवाल खोल्न कोशिस गय्रो। "नाइ नाइ बिहे नगरी पनि … " पार्वती केहि भन्न खोज्दै थियो। तर सागरको ओठ त्यहि समयमा उसको ओठमा जोडियो र लामो गहिरो किसपछि उनले केहि बोल्न सकिनन्। "भिजेको सुरुवाल नलगाउ पो भनेको त" एकछिन पछि सागर बोल्यो। सागरको हात उनको कम्मरमा पुग्दा उनले अब रोकिनन् बरु इजार खोलेर सहयोग नै गय्रो। उनको सुरुवाल पनि खुल्यो तर उनी कम्बल मुनि थिइन। सागरले पनि आफ्नो पाइण्ट खोलेर मिल्कायो। अण्डरवेयर पनि भिजेकोले त्यो पनि खोलेर फाल्यो र पुरै निर्बस्त्र भयो अनि हाँस्दै कम्बल भित्र पस्न कोशिस गय्रो। पार्वतीले कम्बल त अब निकै कस्सिने गरी बेरेर बसेकी थिइन। उनलाइ भित्र नै राखेर सागरले उनलाइ अंगालो हाल्यो। अनि फेरि चुम्बनको प्रक्रिया शुरु भयो। पार्वतीको हातहरु अब अधैर्यपुर्बक उसको नाङ्गो जीउमा चलिराखेको थियो। अलि स्वर फुटेको समयमा उनले भनिन् "त्यो चाहिँ नगर्ने है डर लाग्छ" अब सागर पनि कम्बल भित्र पुगिसकेको थियो। भिजेको कट्टु र ब्रा त पार्वतीले पहिले नै छोदिसकेको रहेछ, त्यसैले पो उनले कम्बल जोडले बेरेकी रहेछन्। अब कम्बल भित्र पुरै निर्बस्त्र केटा र केटी, दुबै अति कामुक। हातहरु अब जतासुकै चलिराखेको थिए। मुख मुख जोदिएर जिब्रोहरु एकअर्कोको मुख भित्र चलिराखेको थियो। पार्वतीको हात अब सागरको कडा लिङ्ग समातेर चलाइराखेको थियो। सागरको हात उनको योनिमा पुग्दा पार्वतीले त्यो हात च्याप्प समातिन् अनि "प्लीज, डर लाग्छ" भनिन। तर सागर त सबै कुराको लागि पुरै तयार रहेछ। "अब मंसीरमा त हाम्रो बिहे भइहाल्छ" त्यो हात माथिल्याएर दुध चलाउदै सागरले भन्यो, "अनि अनसेफ किसिमले गर्नै पनि त होइन नि"। यति भन्दै उसले भुइँमा भएको उसको पाइण्ट तान्यो र त्यसको खल्तीबाट कण्डोमको पाकेट निकाल्यो। "ल हेर, केटा त खतरा रहेछ, यसैको लागि यहाँ ल्याएको हो कि के हो?" पार्वतीको यो प्रश्नपछि सागर अलि भावुक भयो। अनि एउटा हातमा टाउको अदाएर अर्को हात कम्बल माथिबाट पार्वतीलाइ अँगालो हालेर आँखा आँखामा हेरेर सागर बिस्तारै बोल्न थाल्यो। "पहिलो कुरा त म तिमीलाइ धेरै माया गर्छु, पार्वती, I love you very much. मलाइ खुशी लाग्छ कि छिटै हामी बिहे पनि गर्दैछौं। अनि बैवाहिक जिन्दगीको हरेक जिम्मेवारी लिन म तयार छु। अहिले नै म मेरो भनेर भन्दा हाम्रो भन्ने कुरामा बढि सोच्छु। अनि फेरि अर्को कुरा –मेरो मान्यता हो कि सेक्स विबाहको अति महत्वपूर्ण पार्ट हो र मलाइ त यो भरपुर चाहिन्छ। तर आजै चाहिन्छ भनेको होइन। हामी यसअघिको भेटमा पनि सेक्सुअल युनियनको नजिक पुगेकोजस्तो लागेकोले कहिं एक छिनको बेहोशीले जिन्दगिभर पछुताउनु नपरोस र आबश्यकै परे सुरक्षित तरिकाले मज्जा गर्न सकियोस् भनेर यो कण्डोम खल्तीमा तयारी राखेको हो। कुरा यहि हो अब तिमी कुन किसिमले बुझ्छौ?" "कस्तो अनुभवी जस्तो कुरा गर्दा रहेछौ, धेरै अनुभव छ कि यो कुरामा?" "म तिमीसंग केहि पनि कुरा लुकाउन चाहन्न। हो म रस्सिया पढ्दा मेरा केटी साथीहरु थिए र मेरो उनीहरुसंग यौनसम्बन्ध पनि थियो। तर अब यहाँ आएर तिमीसंग भेतेपछि तिमीबाहेक अरु कुनैसंग कुनै सम्पर्क भएको छैन् र म प्रतिज्ञा गर्छु कि तिमीबाहेक अरु कुनै केटीलाइ फुटेको आँखाले पनि हेर्ने छैन्।" यति भनेर सागरले पार्वतीको निधार, गाला र ओठमा म्वाइ खायो। यतिन्जेल सम्मको कुराले त पार्वतीको हात पनि अब सागरलाइ अंगालो हाल्न पुगिसकेको थियो। "हामी आज प्रतिज्ञा गरौं कि हामी एकअर्काको लागि। मेरो तन, मन धन सबै तिम्रो लागि। अनि हाम्रो बीच कुनै कुरा नलुकोस। मैले मेरो पुरानो सम्बन्धको बारे बताएं, अब तिमीलाइ पनि केहि भन्नुछ भने …" पार्वतीले कस्सिएर अंगालो मारेर "I love you सागर I love you" भन्न थालिन्। "मेरो कुनै अनुभव छैन् त्यसैले डर लाग्छ। मेरो लागि त सबै कुरा भनेको तिमी नै हो। तिमीलाइ पाउन म त पुरा रुपले तिमीमै समर्पित छु। त्यो दिन उनीहरु त्यहाँ दिनभरी बसे र त्यस अवधिमा पाकेटमा भएको तिनैवटा कण्डोम प्रयोग भइसकेको थियो। नगरकोटबाट घर फर्केपछि त्यो रात उनी समयमै सुतेकी थिइन तर राती एकचोटि बिउँझेपछि दिउँसोको कुरा सम्झेर सुत्न सकेको थिएन। आज उनले आफ्नो कुमारीत्व सागरको प्यारमा समर्पित गरेर गुमाएकी थिइन्। यो कुरा भन्दा सागरको कुरामा भएको गहिराइ, परिपक्वता, जिम्मेवारीको बोध आदिले उनको मन जितेको थियो। सागरमा उनले त्यो सबै कुरा पाएको थियो जुन उनले कल्पना गर्न सक्ने कुनै आदर्श पुरुषमा हुन्छ। बत्ती बालेर हेर्दा सागर अझै मस्तसंग सुतिराखेको थियो। सागरको इमान्दारी, खुलामन, परिपक्वताले गर्दा बिवाह पछिका पनि सबै उतारचढाव राम्रैसंग चलेर गइरहेको थियो। मुख्यकुरा सागरको उपस्थितिमा उनले सधै सुरक्षित महशुस गर्न सकेको थियो। यस्तो सुरक्षाको, प्यारको प्रतिक अनि एक अर्काको लागि तन,मन,धन समर्पण गरेको आफ्नो पति उनी कुनै हालतमा गुमाउन चाहन्न थिन्। कतै सागर तारासंग निकै आकर्शित त भएको छैन्? अनि फोटोमा देखेको ताराको शरिर सम्झन पु्ग्यो। अनुहार त अहिले सम्म देखेको थिएन। दुइ बच्चाको आमा भैसकेता पनि ताराको योनि निकै आकर्षक थियो – सायद कपाल सबै सफाचट गरेकोले होला। म पनि भोलि यो जंगल चिल्लो पार्छु, उनले सोचिन्। सागरलाइ ताराको ठुला दुधहरु चलाउन मन लागेको हो कि। अनि फेरि ताराको योनिमा भाइब्रेटर पस्दै गरेको तस्बीर अगादि आयो। अनि त्यहिं केटाको ओठ र जिभ्रो पनि थियो। यस्तो दृष्यको कल्पना त उनले पनि गरेकी थिइन्। सम्झनामा नै उनलाइ काउकुटी लाग्न थाल्यो। रमाइलै पो होला, आखिर त्यो खेलौना त हो। तर साँचै त.. मन मनैको कुरामा पार्वतीलाइ हास्न मन लाग्यो। अनि अन्त्यमा निद्रा पनि आउन थाल्यो।भोलि पल्ट दिउसो घरमा कोहि नभएको समय थियो। हिजो रातिको कुरा पार्वतीले सम्झेर उनी आफ्नो कोठामा गइन्। बेडमुनिबाट त्यो भाइब्रेटर निकालिन् र निकै ध्यान दिएर हेर्न थालिन्। फिल्महरुमा देखिने गोराहरुको जस्तो देखिने त्यो खेलौना साँचैको लाडो जस्तै थियो। उनले त्यो लाडोलाई मुट्ठीमा समातिन् र हात तल माथि हल्लाउन थालिन् – जसरी उ सागरलाइ गर्नै गर्थिन्। एक्लै यस्तै चलिराख्दा उनलाइ काउकुती लाग्न थाल्यो। उनले त्यो लाडो आफ्नो लुगा भित्र लगिन र योनिमा छुवाइन्। काउकुती झनै बढ्यो। अनि उनी बेडको छेउमा बसिन र सुरुवाल र अण्डरवेयर खोलिन्। अनि त्यो लाडोको टुप्पो आफ्नो पुतिमा पसाइन् र त्यसको स्वीच अन गरिन्। झुनझुन भाइब्रेट भए पछि उनले अलि अलि गर्दै करिब करिब पुरै लाडो आफुमा घुसाइन् र भित्र बाहिर खेलाउन लागिन्। जति गय्रो त्यति नपुग्ने। अब त उनले जोड जोडले आफ्नो कम्मर पनि त्यो लाडोमा थेलिरहेकि थिइन्। राती उनीहरु निसंकोच त्यो लाडोलाइ पनि संलग्न गरि सेक्स गरे। पार्वतीले पनि आफ्नो पुतिमा मुख र लाडो दुबैको एकैसाथ अनुभव गरे। तर दुइ तीन पल्ट पछि त्यो खेलौनाको उपयोग कमै मात्र हुन थाल्यो। आखिर त्यो ज्यान नभएको खेलौना भन्दा बढि त केहि थिएन्। बिचमा भुषणसंग MSN मा सम्पर्क हुंदा अरु कुराको साथसाथै भाइब्रेटरको अनुभव कस्तो भयो भन्दै सोधेको थियो। भएको कुराहरुको निसंकोच जानकारी आदानप्रदान भयो। फिर्त्ता गर्ने कुरा गर्दा, हतार नभएको र बिस्तारै लिउँला भन्ने कुरा भुषणले गरेको थियोकेहि हप्तापछि फिर्त्ता गर्नको लागि फेरि भेट हुने कुरा भयो। सके चारैजना भेत्नेकुरा भएको थियो। कार्यक्रम अनुसार दिउसै एउटा सपिङ्ग सेन्टरमा भेट्ने कुरा भयो। तर पछि साचै जाने दिन, पार्वतीले जान मानिनन्। सागर मात्रै गयो। भुषणसंग तारा पनि थियो। पसल बाहिर भेटेर एकछिन कुराकानी भयो। सागरले तारालाइ "भाउजु, नमस्कार" भने। ताराले नमस्कार मात्र फर्काइन, खासै केहि कुरा गरिनन्। भुषणसंग भने उसको प्रोजेक्टको बारे अलि लामै कुरा गय्रो। भुषणलाइ उसको प्रोजेक्टमा एउटा सफ्तवेयरको काम थियो र त्यसको लागि उसले सागरलाइ गर्न इच्छुक छ कि भनेर प्रश्न गरे। दुइ तीन दिन पछि सागरले प्रोजेक्टको साइत हेर्ने इच्छा ब्यक्त गय्रो।
Labels: Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, भुषण र तारा